Dacha - kuba yindawo lapho abadala kusukela ekuseni kuze kuhlwe wahlanganyela imibhede noma engadini, into ukutshala, ukhula, okusemathinini noma ukwakha hhayi kuphela. Libuye ithuba elikhulu kangakanani lokwenza izingane ukuba zihlale endaweni evulekile, kusukela inhliziyo ukusebenzisa bengafaké zicathulo, ukumemeza, ukuhleka ngaphandle kokwesaba ukuphazamisa omakhelwane. Ngamafuphi, lokhu ithuba eliyingqayizivele ukuba ngabantwana ngokwabo. Futhi uma isayithi izwe, noma kuphi ensimini, banayo indawo yabo lapho kungaba imahhala - yini enye edingekayo ukuze injabulo zabantu ezincane kangaka?!
esikhaleni somuntu siqu
Indlu izingane kuleli zwe - ikhambi izinkinga eziningi ezihlobene yokuzilibazisa izingane iminyaka 5-9 ubudala kanye nokuqondisa. Akusiyo imfihlo ukuthi OPEC obaba omama, ogogo nomkhulu ngezinye izikhathi "uthola" futhi izingane. Futhi abantu abadala bajwayele noma umane bangabi nasikhathi sokuba nezingane zakho, noma ufuna ukwenzani ezindabeni zabo zomuntu siqu, hhayi ukwenza kanjalo nendima yaso engapheli "ngophethe-amaphoyisa." okungukuthi omunye kudingeka ikhefu kusuka kwenye, futhi-thakazelo kukho nobabili lapha. Ukusiza ukuxazulula inkinga indlu encane izingane kuleli zwe. Yini? Futhi yilokho:
Have izingane zakho kuyodingeka endaweni yawo ukudlala, hhayi endlini evamile. Lapha kugcwele abanikazi ngesikhathi esifunwa yibo, futhi amathoyizi ahlelwe, ifenisha, uma ikhona, njll Azikwazi udoti endlini evamile, ungawulahli onodoli bawo nezimoto, ngenxa yalokho, eziningi ezingqubuzana izimo kancane.
indlu ezweni izingane kuzovumela esikhathini esiningi izingane ulichithe emoyeni, ukuthi abanayo egumbini evamile.
Okwami "uphahla" kuthatha izingane isikhathi eside kakhulu, ngenxa nemicabango yabo ongashi phezu ingxenye imidlalo. Futhi abadala ngeke kudingeke akhathazeke ngokuthi izingane ukukhuphuka "ngendlela engafanele", ukuba uzilimaze, njll
Uma Yakha indlu izingane kuleli zwe, lokhu kubuye osemqoka zemfundo. Abafana, amantombazane engadini kanye ubudala wasesikoleni samabanga aphansi ngokuvamile ukulingisa abantu abadala. Futhi "amafulethi" yangasese kuyoba yisici enamandla emfundweni imizwa inkosi yazo, ukunemba, isifiso sokuthwala abantu Ukuhleleka, ukuhlanzeka ukuzithiba.
Kanjani ukwakha, yini ukwakha
Uma ucabanga, mhlawumbe, indlu eyodwa akwanele, nakuba khona kwakhe - plus omkhulu enhlanganweni zokuzilibazisa izakhamuzi ezisencane villa. Okungcono kakhulu, yebo, udinga okungenani ebaleni lokudlala encane. Izithombe izinketho ezahlukene kungatholakala omagazini abaningi ngezihloko ezifanele. Kukhona ngeke Yiqiniso, jika, slide futhi iyathandeka pool inflatable. sandpit Small ngaphansi isambulela-mushroom noma isihlahla, kwakufanele tenyok, umphelelisi okuhilelekile. Khetha indawo udinga ukuze, ngakolunye uhlangothi, izingane ngeke ujike endleleni, ungagxambukeli omdala, hhayi wanyathelwa imibhede ne isivuno, njll, futhi ngakolunye - ngezikhathi ezithile bangakwazi igcinwe kokubuyekezwa, ngesikhathi ukuba angenele uma kudingeka, noma umane shayela eyodla. Ngokuqondene 'izindlu ", kukhona eziningi ongakhetha. Okokuqala, izingane, izindlu plastic kanye izesekeli ezihlobene angathengwa. zingabantu ngokuqinisekile ngeke ezishibhile, kodwa isikhathi ukubulala izinyoni eziningi ngetshe elilodwa. Made imikhiqizo enjalo ngokuvamile ezenziwe imvelo-friendly impahla, okuhlala, asesabi amathonya kusukela sezulu kanye zonyaka zishintsha. Zenziwa ngendlela yokuthi izingane Ngeke ngilimale noma kubangele wena ngaphezulu phi hlungu. Amawindi izindlu ovulekile futhi iminyango, Kuhlanganisa amabhentshi nobe titulo itafula. Ngokuvamile elalifike amaslayidi noma ezinye amathoyizi fun nezinye izinsimbi. Izindlu ngesineke elikhanyayo kuka zidonse ukunaka kwanoma amantombazane nabafana. Futhi ngobukhulu kuba njalo kungenzeka ukuba ukhethe afanele endaweni yakho ethize. Ungaya enye indlela: ukwenza indlu bebodwa. Ngomqondo onabile, akunzima kakhulu, ikakhulukazi uma ingxenye yekhaya nobungane ithuluzi joinery. Ukuphakama ngokwanele 240-250 cm, ububanzi mayelana ukujula efanayo - 230 cm Gets off isakhiwo zebhodi kuba isitebhisi encane, futhi kungaba emphemeni .. It is zaveza ngokuzikhethela "abakhi". Knock phansi ifenisha - sezinyawo, amabhentshi - futhi kufinyeleleke ngokuphelele kunoma ubaba, umkhulu. Ngu "isakhiwo" imisebenzi ukuheha nezingane zakhe - ndawonye wena kuyoba mnandi emsebenzini.
Amazinyo e izingane ezingaphansi konyaka: nini futhi kungakanani
Centre of lokusungula zezingane nokuzijabulisa "Little Academy" (Strogino) - Ngena Ikusasa
Ukukhethwa kanye ukufakwa izihlalo imoto zezingane kusuka 0 kuya 18 kg
Lapho umntwana uqala ubambe ikhanda? Obonisa, amazinga kanye nezincomo
Indlela inciphise izandla ngemva kweminyaka engu-40?
Aleksandr Svitov: impumelelo kanye biography yezemidlalo